Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Alemana » Berlin sy tanàna hafa Alemanina vonona handray ireo mpitsidika GCC amin'ny 2021
Ny GNTB dia te hampahafantatra ny zavatra omen'i Alemana ary indrindra ny Berlin, ireo mpankafy tanàna, natiora ary kolontsaina monina any amin'ireo firenena GCC.
Alemana dia handray soa amin'ny fangatahana mihoampampana avy amin'ireo teratany GCC be vola be rehefa vita ny fameperana ny dia
Alemana sy Berlin manokana dia toeran-kaleha malaza ho an'ny mponina ao amin'ny GCC noho ny kolontsaina tsy manam-paharoa, ny asa-tanana, ny natiora ary ny traikefa an-tsakafo
Nanao vaksiny mihoatra ny 70% ny mponina ao amin'ny firenena, ny Emira Arabo Mitambatra, miampy ny Saudi Arabia no voalohany amin'ny lisitr'ireo firenena miditra
TheGerman National Tourist Board (GNTB) dia mandray anjara amin'ny Tsena fitsangatsanganana arabo (ATM) tamin'ity herinandro ity, izay atao ao amin'ny Dubai World Trade Center (DWTC), ny hetsika varotra iraisam-pirenena voalohany natao tany aminy hatramin'ny nanombohan'ny valan'aretina.
Ny GNTB dia naniry ny hanaitra ny sain'ny Alemanina ary indrindra ny Berlin, izay tokony hanolotra ireo mpankafy ny tanàna, ny natiora ary ny kolontsaina monina any amin'ireo firenena GCC, amin'ny alàlan'ny fampisehoana ny endrika mahafinaritra sy ny fahaizan'ny Alemanina toy ny fomba amam-panao, asa tanana, sakafo sy zava-pisotro eo an-toerana, kolontsaina sy ny maritrano, ary ny ambanivohitra sy ny natiora isan-karazany eo am-baravaran'ny tanàna alemanina maro.
Ny renivohitra Alemanina Berlin dia manantena ihany koa ny fandraisana ireo mpitsidika manerana ny GCC hahita tanàna vaovao noforonina izay manana zava-baovao ho hita isaky ny zoro, toerana malalaka ho an'ny fanahy malalaka ary fifangaroana lova sy fanavaozana mahavariana.
Na eo aza ny 12 volana sarotra, ity taona ity dia nahatontosa tetikasa marobe eto an-tanàna, toy ny fanokafana ny lapan'ny tanàna namboarina, ny Forum Humboldt malaza, ary ny fanokafana ireo adiresy kanto any Berlin, ny Neue Nationalgalerie ao amin'ny Kulturforum, ny toetra mahaliana amin'ity tanàna tsy miova ity.
Ny tsipika metro U5 koa dia misy fizarana vaovao mampifandray ireo zava-manintona ara-kolontsaina maro an'i Berlin, ary ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena any Berlin (BER) dia misokatra ihany koa ankehitriny, famantarana tsara ho an'ny fanatsarana ny fifandraisana manerantany amin'ny fotoana sarotra ho an'ny indostrian'ny fizahantany sy ny kaongresy.
Teo ambanin'ny Initiative Health Excélicielle Berlin, natombok'i visitBerlin tamin'ny fiandohan'ny taona 2020, hanokatra varavarana ho an'ireo mpizahatany ara-pitsaboana avy any Moyen Orient izay mitsidika an'i Berlin hitady ny fahaizany ara-pitsaboana 'Made in Berlin' sy serivisy fitsaboana manapotika ny tanàna. dia malaza amin'ny.
Tamin'ny fanadihadiana YouGov farany teo izay nanasongadinana fa efa ho ny antsasaky ny mponin'i Emira Arabo Mitambatra (Emira Arabo Mitambatra (Emira Arabo Mitambatra) sy Arabia Saodita no mikasa ny hanao dia iraisam-pirenena amin'ny 2021, ny GNTB dia maniry fatratra ny hampiakatra ny anjaran'ny GCC momba ny 89.9 tapitrisa alina nijanonan'ny mpitsidika vahiny nandray azy ireo. amin'ny 2019.